देशभर मलको हाहाकार, वर्षेनी आउने किसानको गुनासो किन सुन्दैन सरकार ! – Mission Khabar
देशभर मलको हाहाकार, वर्षेनी आउने किसानको गुनासो किन सुन्दैन सरकार !
मिसन खबर ४ पुष २०७८, आईतवार १३:३१
काठमाडौं । देशभर मलको अभाव भएसँगै किसानहरु मारमा परेका छन् । गहुँ र तरकारी बालीका लागि चाहिने मल नपाएको किसानले गुनासो गरेका हुन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यी कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले समेत पाएका छैनन् ।
सप्तरीमा गएको बुधवार मल मागेर किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै घेराउ गरेका थिए । किसानको आन्दोलनपछि सप्तरीका १८ पालिकामा ३ सय ७५ बोरा युरिया र ३ सय ४४ बोरा डीएपी पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारि दिएको थियो । तर यो मल पनि जिल्लाका पर्याप्त नभएको पाइएको छ । कृषि सामग्री कार्यालय राजविराजका निमित्त शाखा प्रबन्धक सोनेलाल मुर्मुले सोझै किसानलाई मल वितरण गर्न नसकिने र अहिले मल पर्याप्त नरहेको जानकारि दिए । पालिकाको सिफारिसमा मल दिँदै आएको उनले बताए । गहुँ छर्ने बेलामा डीएपी र अहिले उम्रिएपछि युरिया मल राख्नुपर्नेमा देशभर मलको अभाव देखिएको छ ।
अहिले देशभर एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया आवश्यक पर्छ  । तर अहिले कृषि सामग्रीको गोदाममा नौ हजार आठ सय टन युरिया र तीन हजार एक सय २२ टन डीएपी तथा साल्ट ट्रेडिङसँग नौ हजार एक सय ६६ टन युरिया गरी कुल २२ हजार १ सय ३८ टन मात्रै रासायनिक मल मौज्दातमा देखिएको छ । १५ हजार टन युरिया आपूर्तिको क्रममा रहेको छ । चालु वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि दुई लाख ३२ हजार टन मल आउने टुङ्गो नै लागेको छैन । ७६ हजार पाँच सय टन मात्रै आपूर्ति भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेपछि आपूर्तिकर्ताले नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलले बताएपनि अभाव कसरी टार्ने भन्नेबारे सरकारी अधिकारिहरु बेखबर जस्तै देखिएका छन् । किसानले बर्षेनी मल र बिउविजनको अभाव ब्यहोर्नुपर्दा सरकार कसरी समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्ने भन्नेमा गम्भिर नदेखिएको किसानहरुले आरोप लगाउदै आएका छन् ।